Fanamarihana momba ny zon'ny mpamorona - ZD manam-pahaizana zoro
Home > Fanamarihana momba ny zon'ny mpamorona
Raisinay ho zava-dehibe ny fanitsakitsahana ny zon'ny mpamorona ary hiaro ny zon'ny tompon'ny zon'ny mpamorona.
Raha tompon'ny zon'ny mpamorona ny votoaty hita amin'ny tranokalanay ianao ary tsy manome alalana ny fampiasana an'io votoaty io, dia tokony hampahafantarinao anay ny fanoratana mba hahafahantsika mamantatra ireo votoaty voarohirohy mandika sy mandray andraikitra.
Raha tsy manome anay ny anton-javatra takiana ianao dia tsy afaka mandray fepetra, ka raha mino ianao fa voapoaka na voataona ny fitaovana voakasiky ny zon'ny mpamorona, dia omeo azafady amin'ireto manaraka ireto ny mpitsikera ny zon'ny mpamorona.
1.) Famantarana ara-batana na elektronika olona nomena alalana hanao asa ho an'ny tompon'ny zo tokana izay lazaina fa mpandika lalàna.
2.) Fantaro ireo asa zon'ny mpamorona voarindra izay voalaza fa tsy mandika, na, raha toa ka tafiditra ao anaty fampandrenesana ny lisitr'ireo zon'ny mpamorona voaroana amin'ny tranokala tokana ao anaty tranonkala iray dia asio lisitra misy ny lisitr'ireo solontena toa an'io toerana io.
3.) Fantaro ireo fitaovana milaza fa mpitaona ny lalàna na ho anton'ny hetsika fanitsakitsahana, esory na ho horavana izany, ary fampahalalana izay ampy hahafahantsika mahita ny fitaovana.
4.) Fampahalalana ampy ahafahantsika mifandray amin'ny fimenomenonana, toy ny adiresy, laharana an-tariby, ary (raha misy) adiresy mailaka izay ahafahan'ny tarika mitaraina.
5.) Fanambarana Ny antoko mitaraina dia mino fa ny fampiasana ny fitaovana tsy misy fitarainana dia tsy nahazo alàlana avy amin'ny tompon'ny zon'ny mpamorona na mpamorona azy.
6.) Ny fampahalalana ao amin'ny fampandrenesana fampandrenesana dia marina ary manasazy perjury, manondro fa nomena alalana hanao izay hampandeha ho an'ny tompon'ny fahefana tokana izay voamarina fa voahitsakitsaka.
Adiresy mailaka: web [amin'ny] zdgov.com.